Umthetho Wezasolwandle e-UAE | Izinkampani Zomthetho Wasolwandle e-UAE
Umthetho Wezasolwandle e-UAE
Imithethonqubo Yezimboni Zasolwandle ze-UAE
Umthetho Omusha Wasolwandle e-UAE
Umthetho wasolwandle e-UAE, uwonke, uyindawo yomthetho eyinkimbinkimbi ngokwedlulele. Luhlelo lwezomthetho olulawula ukuhamba kwemikhumbi, amatilosi, nayo yonke eminye imikhumbi enjalo esetshenziswa emanzini.
Ezokuthutha zasolwandle kanye ne-akhawunti yokuhweba yamaphesenti amakhulu kuyo yonke imisebenzi emikhulu yokuhweba emhlabeni wonke. Futhi e-United Arab Emirates, imisebenzi yokungenisa nokuthekelisa ibalulekile. Ngakho-ke, inelinye lamachweba amatasa kakhulu emhlabeni. I-UAE isendaweni eseMpumalanga Ephakathi enethrafikhi eningi yokuhambisa futhi ethanda ezokuthutha zasolwandle. Yindawo ebaluleke kakhulu kwezomnotho yezokuhambisa, ukuhweba kanye nezindaba zasolwandle.
Eminyakeni embalwa edlule, imboni yasolwandle ibilokhu idonsa kanzima ngokushintsha kwezomthetho kwezwe futhi ngenxa yesidingo esikhula njalo sezinsizakalo zemikhumbi, imboni iye yajwayela futhi yafunda ukuzijwayeza lezo zinguquko. Izinkonzo zemikhumbi esifundeni sase-Gulf zithembele kakhulu emthethweni wezolwandle esifundeni, njengoba unikeza isisekelo esiqinile somthetho wasolwandle embonini.
Ngaphandle kwalokhu, abantu abaningi abazi ukuthi imithetho elawula imisebenzi eyenzeka emhlabeni yehlukile kuleyo elawula impilo emanzini okuhamba kuwo. Ukulimala nezingozi ezenzeka emanzini okuhamba kuwo kungaphansi kwemithetho ehlukile kunaleyo eyenzeka emhlabeni. Leyo mithetho elawula izingqinamba emanzini okuhanjwa nawo ngokuvamile ibizwa ngokuthi i-admiralty noma umthetho wasolwandle.
Futhi le mithetho yasolwandle inezinto eziningi eziyinkimbinkimbi ezingenza kube nzima ukuziqondisa. Ngakho-ke lapho usebenza embonini yezolwandle ye-UAE, udinga usizo lwabameli basolwandle abanolwazi nganoma yiziphi izinkinga ezingokomthetho ibhizinisi lakho elibhekene nazo. Kwa-Al Obaidli & Al Zarooni Advocates & Legal Consultants (Lawyers UAE), abameli bethu basezasolwandle banolwazi nobuchwepheshe bokuhlinzeka ngezeluleko zezomthetho nokumelela ekuxazululeni izingxabano zasolwandle kanye nokubhala zonke izinhlobo zezinkontileka zasolwandle.
Uyini Ububanzi Bomthetho Wasolwandle?
Umthetho wasolwandle ngumthetho wangasese wokuthumela nokuzula. Kuyisethi ehlukile yemithetho nemithethonqubo elawula izinkontileka, ama-tort (njengokulimala komuntu), kanye nezicelo zesinxephezelo zabasebenzi ezivela ekulimaleni okwenziwe emanzini okuhamba.
Ububanzi bomthetho wasolwandle e-UAE buhlanganisa ukuthunyelwa, ukuzula, ukudonsa, izikebhe zokuzithokozisa, kanye nokuhweba emanzini, ekhaya nakwamanye amazwe. Ilawula imisebenzi yolwandle yemvelo, amachibi, nemigwaqo yamanzi kanye namanzi okuhamba ngomuntu enjengemisele. Umnikazi wemikhumbi angabekwa icala nganoma yikuphi ukulimala komsebenzi wasolwandle uma umkhumbi noma izinto ezisetshenziswayo bezingafanelekile futhi zidale ukulimala.
Futhi ngaphansi komthetho wasolwandle, unelungelo lokufuna isinxephezelo nganoma yikuphi ukulimala okutholayo emanzini ohamba ngawo, noma ngabe uyilungu lezisebenzi noma umgibeli womkhumbi. Ungathola amademeshe kufaka phakathi inkokhelo elahlekile, izindleko zezokwelapha, ukulimala kobuhlungu nokuhlupheka, kanye nokulimala okungokomzwelo. Umthetho wasolwandle ubuye ubheke ukulimala okwenzeka emhlabeni kepha kuhlobene nomsebenzi oqhubeka emikhunjini yasolwandle (noma imisebenzi yokuhamba ngesikebhe).
Sibutsetelo se-UAE Maritime Law
Ikhodi ye-UAE Maritime ngumthetho olawula konke ukwenziwa kwemikhumbi nemikhuba yokuhambisa e-UAE. Yaziwa nangokuthi yi-UAE Federal Law No. 26 ka 1981. Yashaywa ngokuhambisana nemithetho yanamuhla yezasolwandle futhi isebenza ngezinkinga eziningi zomthetho wasolwandle wase-UAE, kufaka phakathi izindaba ezinjenge:
Ubunikazi nokusetshenziswa kwemikhumbi;
Ilungelo lokulala emithwalweni yomkhumbi;
Ukuthi ngubani ophethe;
I-Master and Crew yomkhumbi;
Izinkontileka zokuthwala impahla nokuhamba nempahla;
Umthamo kanye nokuhlolwa kwemikhumbi;
Ukushayisana okubandakanya imikhumbi;
Ukulondolozwa okubandakanya imikhumbi;
Umshuwalense wasolwandle; futhi
Ibha yesikhathi / umkhawulo wezimangalo zasolwandle.
Ikhodi yasolwandle isebenza kuwo wonke ama-Emirates ayisikhombisa. Noma yimuphi umnikazi webhizinisi obambe iqhaza kunoma yimuphi umsebenzi wasolwandle eDubai noma ezinye izingxenye ze-UAE kufanele abheke izidingo zomthetho zokuthuthwa kolwandle.
Inkampani yethu yabameli iyithatha ngokungathi sína kakhulu indawo yomthetho wasolwandle. Futhi abameli bethu basolwandle bangakunika imininingwane ngokuhambisana noMthetho Wezasolwandle wase-UAE. Singakunikeza imininingwane ebanzi mayelana nezinkinga ezisetshenziswa yimithetho yasolwandle ye-UAE.
Imithethonqubo Yezimboni Zasolwandle e-UAE
Ikhodi ye-UAE Maritime inezigaba eziningana ezibandakanya izindaba eziningi. Lezi zindaba zisukela ezindabeni eziphathelene nezidingo zokubhaliswa kuya kumshuwalense wasolwandle. Nazi ezinye zezinkinga ongase ucabange ngazo uma unezinhlelo zokwenza noma yini ephathelene noMkhakha Wezasolwandle e-UAE:
# 1. Ubunikazi Bezitsha Abatshalizimali Bamazwe Angaphandle eDubai
Abezizwe abanamabhizinisi eDubai kufanele bagcine imithethonqubo yobunikazi bemikhumbi ye-UAE. Uma ungumfokazi futhi unenkampani yasolwandle eDubai, awukwazi ukubhalisa imikhumbi yakho, izikebhe neminye imikhumbi.
Okuwukuphela kwabantu abavunyelwe ukubhalisa imikhumbi enjalo ngabantu base-UAE, izinkampani, namabhizinisi okungenani ane-51% yabantu base-UAE njengabanikazi. Uma laba bantu bethengisa umkhumbi obhalisiwe we-UAE kumuntu wangaphandle noma inhlangano, ukubhaliswa kwe-UAE kuzokhanselwa.
# 2. Ukuthuthwa Kwezimpahla Ngolwandle
Ukuthuthwa kwempahla olwandle kudlala indima ebalulekile emnothweni we-UAE. Lokhu kungenxa yokuthi i-UAE inamachweba amaningana atholakala ngokuhlelekile ezimpambanweni zomgwaqo wesifunda sase-Middle East / Southwest Asia.
Ngakho-ke, kubalulekile ukuthi ube nolwazi olwanele ngemithetho yezomthetho maqondana nokuthuthwa kwempahla olwandle, njengoba kusebenza ku-UAE.
I-UAE Maritime Code ifaka isikweletu senkampani ethwala ngokubambezeleka kokulethwa kwezimpahla. Umphathi wezimpahla emikhunjini yolwandle e-UAE angabophezeleka nganoma ikuphi ukubambezeleka kokuletha izimpahla echwebeni lapho ziya khona.
Izikhathi eziningi, akukho ukulahleka komzimba lapho kukhona ukubambezeleka kokulethwa kwalezo zimpahla. Noma kunjalo, ungathola umonakalo nganoma yikuphi ukulahlekelwa kwezomnotho okuhlangabezane nakho ngenxa yokubambezeleka kokulethwa kwempahla.
# 3. Ukushaywa Kwemikhumbi Yasolwandle
Ukuqashwa kwemikhumbi e-UAE kumboza ukuqashwa kwazo zonke izinhlobo zemikhumbi olwandle, kufaka phakathi imikhumbi yeziqukathi, imikhumbi emikhulu, amathangi, kanye nemikhumbi yokuhamba.
Izinsizakalo zeCharter ziphatha izinhlobo ezahlukahlukene zamashadi, kufaka phakathi umqulu wohambo, umqulu wesikhathi, umqulu wezikebhe ezingenamikhumbi, kanye nesivumelwano sokushona.
Ngaphansi kwesivumelwano sohambo, i-charter charter iqasha umkhumbi bese ikhokhela ukusetshenziswa kwawo ohambweni olulodwa noma kwesinye isikhathi olwandile. Ngakolunye uhlangothi, amashadi esikhathi avela lapho i-charter iqasha umkhumbi isikhathi esithile.
Futhi kumashadi wokushona, umnikazi womkhumbi uqashisa umkhumbi kumuntu oqashisayo onikeza abasebenzi, kanye nezitolo kanye nezindawo zokugcina izindlu, futhi akhokhele zonke izindleko zokusebenza.
Uma uhlela ukuqasha umkhumbi wasolwandle e-UAE, kuzofanela unqume ukuthi hlobo luni lomqulu ozolusebenzisa.
# 4. Ukuboshwa Kwemikhumbi Yasolwandle
Akuvamile ukuthi kuboshwe imikhumbi yasolwandle emkhakheni we-UAE Maritime. Futhi njengomnikazi wemikhumbi, kungakhathaza ukuthi ibhizinisi lakho liphazamiseke ngoba umkhumbi wakho uboshiwe.
Kubalulekile ukuthi wazi ukuthi ngaphandle komthetho osebenzayo olawula inkontileka, izinkantolo ze-UAE zinganikeza ukuboshwa uma isenzo senzeka ngaphakathi kwe-UAE.
Ibhange noma isiqinisekiso semali enkantolo ukuphela kwempumuzo ekuboshweni e-UAE.
Xhumana no-Al Obaidli & Al Zarooni Advocates & Legal Consultants (Lawyers UAE) ukuze Bakusize Uvikele Ibhizinisi Lakho Lasolwandle
At Al Obaidli & Al Zarooni Advocates & Legal Consultants (Lawyers UAE), sinabameli bochwepheshe baseMaritime abakwaziyo futhi abazimisele ukuqinisekisa ukuthi uqhuba ibhizinisi elingenamthungo olwandle e-UAE.
Sinokuhlangenwe nakho ezindaweni ezahlukahlukene zomthetho wasolwandle, kufaka phakathi:
Izingozi zokushayisana olwandle
Izimangalo zokulimala komuntu
Isibopho nezimangalo zomnikazi wesitsha
Umshuwalense ongaba khona wobungozi kanye nomshuwalense wasolwandle
Ukubhaliswa, imibhalo kanye nobunikazi bomkhumbi
Izimpikiswano zeBill of Lading
Cargo, Freight kanye nokuthuthwa kwezidakamizwa okuyingozi
Izingxabano zeCharter Party
Ibha yesikhathi yezicelo zasolwandle; phakathi kwabanye
Ifemu yethu izokunikeza ukumeleleka okugxile, okusebenzayo, komuntu siqu, kanye nokungabizi ekulawuleni icala lakho lecala. I-Al Obaidli & Al Zarooni Advocates & Legal Consultants (Lawyers UAE) iyifemu ehamba phambili yezomthetho wasolwandle e-Dubai enolwazi kuzo zonke izici zomthetho wasolwandle okuhlanganisa umthetho wezohwebo, umkhumbi, ukwakha imikhumbi, nezimboni zasogwini. Siyiqembu labameli abazinikele nabanolwazi lwezasolwandle abavela e-United Arab Emirates (UAE), abahlinzeka ngezinsizakalo zomthetho embonini yezokuthutha.
Uma ufuna imininingwane eminingi ngokuthunyelwa kolwandle nokuhweba e-UAE noma ufuna ukuthi sikusize ngezindaba zakho zasolwandle, thinta inkampani yethu yabameli e Dubai.